Himalaya Dainik » हामीले रंगशाला निर्माण गर्न लागेर के गल्ती गर्यौ ?
हामीले रंगशाला निर्माण गर्न लागेर के गल्ती गर्यौ ?
पहिले त सकारात्मक–नकारात्मक टीका–टिप्पणी गर्ने सबैलाई एकमुस्ट रुपमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु । उहाँहरूका यस्ता प्रतिक्रियाकै कारण हामीलाई थप ऊर्जा मिलेको छ ।
उहाँहरूले हामी तथा हाम्रो अभियानप्रति जिज्ञासा राख्नु, प्रश्न उठाउन स्वभाविक हो । किनभने यसमा उहाँहरूकै प्रत्यक्ष सहभागिता रहनेछ । यसबीच नकारात्मक टिप्पणी गर्नेहरूलाई म उल्टै सोध्न चाहन्छु– यति ठूलो परियोजनाको घोषणा गरेर हामीले गल्ति चाहिँ कहाँनेर गरेछौं ? हामीले के गल्ती गरेका छौं भन्ने जिज्ञासा मेरो मनमा पनि पैदा भैरहेको छ । किनभने हामीले उक्त रंगशाला कुनै विदेशी भूमिमा नभइ आफ्नै देशमा निर्माण गरिरहेका छौं ।
हाम्रै पालामा उक्त रंगशालाको निर्माण कार्य पूरा हुनेछ । नेपाली जनतासँगै सुझाव मागेरै हामीले रंगशाला निर्माणको अभियान थालेका हौं । नेपाली क्रिकेट खेलाडीहरूले सात–आठ महिनाअघि नेपाललाई ऐतिहासिक सफलता दिलाएको बेला सामाजिक सञ्जालहरूमा वाह नेपाल, वाह नेपाली खेलाडी भन्नेहरू नेपाली नै हुनुहुन्थ्यो । त्यो बेला क्रिकेट खेलाडीहरूका लागि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशाला चाहियो भनेर माग गर्नेहरू पनि नेपाली नै हुनुहुन्थ्यो ।
हामी त्यो बेला नमुना नेपालको अभियानमा केन्द्रित थियौं । फेसबुकमा मैले नै एउटा स्टाटसमार्फत रंगशाला पहिले कि नमुना नेपाल ? भनेर जिज्ञासा राखेको थिएँ । मेरो जिज्ञासामा करिब ८० प्रतिशतले क्रिकेट रंगशाला पहिले चाहिन्छ भन्नुभएकैले धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले बाँकी काम थाँती राखेर क्रिकेट रंगशालाको निर्माण दिन–रात एक गर्न थालेका हौं । अहिले आएर उहाँहरू नै यो विषयमा किन विवाद गरिरहनुभएको छ, मैले नबुझेको कुरा यत्ति हो ।
रंगशाला बनाउने काम सरकारकै हो, तर सरकारलाई कुर्दा त्यो रंगशाला कति वर्षमा बन्ला ? हिजो नमुना बस्ती बनाउने काम पनि सरकारकै थियो नि । सरकारले नै एकिकृत नमुना बस्ती बनाइदिएको भए हुन्थ्यो नि । त्यो पनि सरकारकै दायित्वको कुरा थियो, तर सरकारी प्रकृया लामो हुने, झन्झटिलो हुने, धेरै वर्ष लाग्ने भएकैले हामी तातेका थियौं । जनस्तरबाट गर्दा छिटो–छरितो र कम खर्चमै काम सम्पन्न हुने भएकाले हामी जनताकै प्रतिनिधि सक्रिय भएका हौं ।
सरकारको मुख ताकेर बसेको भए ती नमुना बस्ती बन्थे होला त ? सबैले सकारात्मक रुपमा सहयोग गरेकै कारणले तथा नागरिक स्तरबाट खटिँदा निर्धारित मितिमै सम्पन्न भएका उदाहरणहरू त हामीले नै प्रस्तुत गरिसकेका छौं नि । यद्यपि, हामीलाई सरकारको शतप्रतिशत सहयोग चाहिन्छ । हामी त सरकारलाई सघाउने अभियन्ता मात्र हौं । रंगशाला निर्माणको दायित्व पनि सरकारकै हो, तर समयमै पूरा नहुने भएकाले हामीले अभियन्ताका रूपमा खटिएर सरकारलाई नै सजिलो पारिदिएका हौं ।
दशरथ रंगाशालाको पुनर्निमाणलाई हेरौं, मूलपानीको क्रिकेट रंगशालालाई हेरौं, कति वर्षदेखि निर्माणाधीन अवस्थामै छन् । यस्तो अवस्थामा हामीले आमनेपाली जनताकै सल्लाह, सुझाव एवं सहयोगमै जनस्तरबाट चितवनमा क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्ने घोषणा गरेका हौं । यो रंगशाला निर्माण पनि सरकारलाई उपस्थित नगराई सम्भव छैन, त्यसैले सरकारको उपस्थितिमा घोषणा गरेका हौं । हामीले त जनस्तरबाट रकम संकलन गरेर जनताकै सहभागितामा रंगशाला निर्माण गर्न पहल गरेका हौं । विश्वमै जनताले बनाएको पहिलो रंगशालाको कीर्तिमान कायम गर्न लागेका हौं ।
(धुर्मुसले साप्ताहिकसँग गरेेेको कुराकानीको सम्पदित अंश)